နေ့စဉ်ခွန်အားလုပ်ငန်းအကြောင်း | Myanmar Our Daily Bread
အာရ်ဘီစီသာသနာလုပ်ငန်း၏သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် နိုင်ငံအသီးသီးရှိ လူအပေါင်း တို့သည် ခရစ်တော်ကို ကိုယ်ပိုင်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီး ခရစ်တော်၌ ကြီးပွား ရင့်ကျက်သူများဖြစ်လာစေရေး ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ပေါက်ရောက်စေရေး နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် ရနိုင်သမျှမီဒီယာ ပေါင်းစုံကို အသုံးပြုလျက် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း ဤ၀က်ဘ်ဆိုက်၏စာမျက်နှာများ၌ မြင်ရပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သောနည်းလမ်းစုံလင်သကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိသတ်များ မှာလည်း လူအမျိုးမျိုးပါဝင်သည်။ သင်းအုပ်ဆရာ၊ အကြံပေးပညာရှင်များ၊ သာမန်အရပ်သား စသည်ဖြင့် လူအသီးသီးမှတဆင့်၊ အကျဉ်းထောင်၊ ကျောင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစသည့် အဖွဲ့ အစည်းများမှတဆင့် မိသားစု၊ မိတ်ဆွေနှင့်အသင်းတော်များကို ဆက်သွယ်ထိတွေ့လုပ် ဆောင်နေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ဆက်သွယ်ထိတွေ့လိုက်သောသူများသည် သခင်ယေရှု၏ အမိန့်တော်နှင့်အညီ ဧ၀ံဂေလိသတင်းကောင်းဖြန့်ဝေရန် စွမ်းရည်အလင်းရှိသူများဟု မှတ်ယူပါ သည်။ ကျွန်ုပ်၏အဖိုး ဒေါက်တာ အမ်. အာရ်. ဒီဟန်းမှ အာရ်ဘီစီ သာသနာလုပ်ငန်းကြီးကို စတင်ခဲ့သည့်အချိန်မှစ၍ ဘုရားသခင်သည် တိုင်းတာမရနိုင်လောက်အောင် ကောင်းကြီးပေးခဲ့ ပါသည်။ အဖိုးချမှတ်ခဲ့သည့် မူလအခြေခံရည်မှန်းချက်များအတိုင်း တည်ကြည်စွာ၊ သစ္စာာရှိစွာ ဆက်ကပ်အပ်နှံလုပ်ဆောင်သူများပါဝင်သည့်သာသနာပြုလုပ်ငန်းမှာ ကျယ်ပြန့်တိုးပွားအောင် မြင်ခဲ့သည်။
သင့်ကိုကြိုဆိုလျက် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်ပါရန်လည်း တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ အာရ်ဘီစီ သာသနာလုပ်ငန်းမှ သင်အသုံးချနိုင်မည့်အရာဘာရှိမလဲ မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ သိလိုသမျှ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ဝေဖန်သုံးသပ်မှုများကိုလည်း လက်ခံပါသည်။ မည်သည့်ကိစ္စဖြစ်စေ သင့်ဖက်မှတုံ့ပြန်ဆက်သွယ်လာမှုကို လက်ခံရရှိလိုပါသည်။ အာရ်ဘီစီသာသနာလုပ်ငန်းကို စိတ်ဝင်စားသောကြောင့် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။